MAMETRAKA SARY MIAINGA AMIN'NY SOLOSAINA AMIN'NY WINDOWS 7 - WINDOWS - 2019
Mametraka sary miainga amin'ny solosaina amin'ny Windows 7
Ny fidiran'ny fidirana amin'ny kaonty Google dia tsy mahazatra. Mitranga izany matetika satria adinon'ilay mpampiasa fotsiny ny tenimiafina. Amin'ity tranga ity dia tsy sarotra ny mamerina azy io. Ahoana anefa raha mila mamerina indray ny kaonty efa voafafa na nosakanana?
Vakio ao amin'ny tranokalanay: Ahoana no hamerenana ny tenimiafina ao amin'ny kaontinao google
Raha voafafa ilay kaonty
Tsikaritrareo avy hatrany fa afaka mamerina indray ny kaonty Google-nao, izay nofafana tsy mihoatra ny telo herinandro lasa izay. Raha toa ka tapitra ny vanim-potoana voatondro, dia tsy misy intsony ny fotoana hanavaozana ny kaonty.
Ny dingan'ny fanavaozana ny "kaonty" Google dia tsy mamela fotoana betsaka.
Mba hanaovana izany, mankanesa any pejy fanarenana tenimiafina ary ampidiro ny adiresy mailaka mifandraika amin'ny kaonty mba haverina amin'ny laoniny.
Avy eo tsindrio "Next".
Ampahafantarinay fa nofafana ny kaonty nangatahana. Mba hanombohana ny fihavaozany dia tsindrio ny soratra "Miezaha hamerina azy io".
Ampidiro ny kapila ary, mbola handeha lavitra kokoa izahay.
Ankehitriny, ho fanamafisana fa antsika ny kaonty, dia tsy maintsy mamaly fanontaniana maromaro. Voalohany dia nangataka ny hanomezana tenimiafina izay tsaroantsika.
Ampidiro fotsiny ny tenimiafina ankehitriny avy amin'ny kaonty nofafana na izay efa nampiasaina teto. Azonao atao ihany koa ny mamaritra karazana tarehimarika marim-pototra - amin'izao fotoana izao dia misy fiantraikany amin'ny fomba hanamafisana ilay fandidiana.
Avy eo isika dia hangatahana hanamafy ny maha isika antsika. Safidy iray: mampiasa ny nomeraon'ny finday mifandray amin'ny kaonty.
Ny safidy faharoa dia ny mandefa fehezan-teny fanamafisana iray isaky ny mailaka.
Ny fomba fanamafisana ny fanamafisana dia azo ovaina amin'ny alàlan'ny fanindriana amin'ny rohy "Fanontaniana hafa". Noho izany, safidy fanampiny ny manondro ny volana sy ny taona amin'ny famoronana Google.
Aoka hatao hoe nampiasa ny fanamafisana ny maha-izy azy amin'ny alàlan'ny mailaka hafa. Nahazo ny fehezan-dalàna izahay, nanoratra izany ary nampiditra izany tao amin'ny saha mety.
Ankehitriny dia mitoetra ho fananganana ny tenimiafina vaovao.
Amin'izany fotoana izany, tsy tokony hifanaraka amin'ny efa nampiasaina taloha ny fampifanarahana karazana endri-tsoratra.
Ary izany rehetra izany. Kaonty Google naverina indray!
Tsindrio ny bokotra Security Check, afaka mandeha haingana any amin'ny sehatra ianao mba hamerenana indray ny fidirana amin'ny kaontinao. Na tsindrio "Continue" ho an'ny asa fanampiny amin'ny kaonty.
Mariho fa ny famerenana indray ny kaonty Google, dia "hanavao" ny angon-drakitra rehetra amin'ny fampiasana azy ary hamerina indray ny fidirana amin'ny serivisy rehetra amin'ny karazana fitadiavana.
Ity ny fomba tsotra izay ahafahanao "mitsangana" kaonty Google iray lavitra. Ahoana anefa raha matanjaka kokoa ny toe-draharaha ary mila mahazo kaonty voasakana ianao? Momba izany fanampiny.
Raha voasakana ny kaonty
Google dia mamaritra ny zo hamarana ny kaonty amin'ny fotoana rehetra, mampahafantatra ny mpampiasa na tsia. Na dia ampiasain'ny Corporation of Good Good aza izany fahafaha-manao izany, dia mitranga matetika izany karazana fanakanana izany.
Ny antony mahazatra indrindra amin'ny fanakanana kaonty ao amin'ny Google dia antsoina hoe tsy fanarahan-dàlana amin'ny fitsipika momba ny fampiasana vokatra avy amin'ny orinasa. Mandritra izany fotoana izany koa, ny fidirana dia mety ho tapakila tsy amin'ny kaonty manontolo, fa amin'ny serivisy iray ihany.
Na izany aza, ny kaontina voasakana dia mety "averina indray". Ity lisitra manaraka ity dia atolotra amin'izany.
Raha tapaka tanteraka ny fidirana amin'ilay kaonty, dia atolory ny hahafantaranao ny antsipiriany amin'ny antsipiriany. Fomba fampiasa Google ary Fepetra sy fepetra momba ny fitondran-tena sy ny votoatin'ny mpampiasa.
Raha tsy voasakana ny fidirana amin'ny serivisy iray na maromaro Google dia tsy ilaina ny mamaky azy io ny fitsipika ho an'ny vokatra finday tsirairay.
Ilaina izany mba hahafahana mamaritra ny antony mety hitrangan'ny fanakanana azy alohan'ny hanombohana ny fizotran'ny fanavaozana ny kaonty.
Manaraka izany, mankanesa any teny fampiharana ny fanarenana kaonty.
Eto amin'ny fehintsoratra voalohany dia manamarina fa tsy diso izahay amin'ny fampidirana ny angon-drakitra ary ny kaontinay dia tena kilemaina. Izao dia manondro ny mailaka mifandray amin'ny kaontina voasakana (2), ary koa adiresy mailaka mivaingana ho an'ny fifandraisana (3) - Izany no hahazoanay vaovao momba ny fivoaran'ny kaonty.
Farany farany (4) Natao hanondroana ny fampahalalana momba ny kaonty voasakana sy ny fihetsika ataontsika miaraka aminy, izay mety hahasoa amin'ny famerenana azy. Rehefa vita ny taratasy dia tsindrio ny bokotra "Alefaso" (5).
Ankehitriny dia mila miandry taratasy avy amin'ny kaonty Google izahay.
Amin'ny ankapobeny, tsotra sy mazava ny fomba famahana ny kaonty Google. Na izany aza, noho ny antony maro dia maro ny fanalana ny kaonty, ny tranga tsirairay dia manana ny nuance manokana.